Volo-loko miloko maritrano Maja Wronska | Famoronana an-tserasera
Ilay artista poloney miloko loko Maja Wronska manohy mandoko ny fanehoana loko mipoaka ao anatin'ny maritrano eropeana. La Mpanakanto poloney miaraka amin'ny loko mandoko ao aminy Maja Wronska manohy mandoko ny fanehoana loko mipoaka ao anatin'ny maritrano eropeana, toa azy mpanao mari-trano namboarina izy, fahaizana manatsara be indrindra ny zavakanto. Ataony voalohany ny sombiny tsirairay a sary amin'ny antsipiriany, ary ampio ny sosona watercolor, mpanelanelana tsy fantatra mialoha izay mety ho sarotra ny mifehy, noho izany vao mainka mampino ny sary hosodoko.
Teraka tamin'ny 28 Janoary 1989 izy. Nahazo diplaoma tamin'ny University of Technology Warsaw (Fahaketrahana amin'ny mari-trano). Izy dia miasa amin'ny mpanao mari-trano e sary tsy miankina. Ny sary nataony dia mifandray akaiky amin'ny maritrano, izay tsy isalasalana fa ataony dia ny maritrano ny aingam-panahiny. Nanomboka nanintona tamim-pahamatorana izy nandritra ny taranja fanaovana sary nandritra ny fianarany. Io no fomba nandaniany ny faran'ny herinandro sy ny hariva nandritra ny fianarany tany amin'ny lise.
Rehefa nanomboka nianatra sary aho dia nahita tsy fahombiazana. Avy eo dia tsapako fa tena tsy nahomby firy aho. Somary hafahafa ihany izany, saingy nahita ny tenako nanao asa aho ny zoma na asabotsy maraina, ary tonga tamin'ny filàna sary. Heveriko fa ny aingam-panahiko dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ny herinandro, izay mifandray amin'ny mahazatra.
Tsy mpanao mari-pahaizana matihanina aho. Nahazo diplaoma tamin'ny Architecture tao amin'ny University of Technology Warsaw aho. Mifandray amin'ny hetsika ara-javakanto aho fa tsy mitovy amin'ny sary hoso-doko na sary. Misy ny fampianarana sary sy sary hoso-doko mandritra ny roa taona voalohany, saingy izay ihany. Ny hetsika ara-javakanto dia voafetra amin'ny famolavolana maritrano tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Volo-loko miloko maritrano an'i Maja Wronska